ခေတ်မီဆန့်ကျင်သောပါးလွှာသောကတ္တီပါပိတ်ထည်ထိုင်ခုံ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မစီးပါ WoopShop®
အရောင် အစိမ်းရောင် 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs အဝါရောင် 1pcs ရေတပ် 1pcs Khaki 1pcs
specification 110x110CM 1pcs 90x240CM 1pcs 110x180CM 1pcs 110x160CM 1pcs 110x240CM 1pcs 110x210CM 1pcs 30x50 pillowcase 45x45 pillowcase 90x90CM 1pcs 90x70CM 1pcs 90x160CM 1pcs 90x120CM 1pcs 90x210CM 1pcs 90x180CM 1pcs 70x90CM 1pcs 70x70CM 1pcs 70x120CM 1pcs 70x180CM 1pcs 70x150CM 1pcs 70x240CM 1pcs 70x210CM 1pcs
အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x110CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x240CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x180CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x160CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x240CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x210CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 30x50 ခေါင်းအုံး အစိမ်းရောင် 1pcs / 45x45 ခေါင်းအုံး မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x90CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x70CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x160CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x120CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x210CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x180CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 110x110CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 90x240CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 110x180CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 110x160CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 110x240CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 110x210CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 30x50 ခေါင်းအုံး မီးခိုးရောင် 1pcs / 45x45 ခေါင်းအုံး အဝါရောင် 1pcs / 70x90CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x70CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x240CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x210CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 110x160CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 110x110CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 110x210CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 110x180CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 45x45 ခေါင်းအုံး ရေတပ် 1pcs / 110x240CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x70CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 30x50 ခေါင်းအုံး မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x120CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x90CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x180CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x150CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x240CM 1pcs မီးခိုးရောင် 1pcs / 70x210CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 45x45 ခေါင်းအုံး အဝါရောင် 1pcs / 110x240CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x70CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 30x50 ခေါင်းအုံး အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x120CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x90CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x180CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x150CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x240CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 70x210CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x90CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x70CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x160CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x120CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x210CM 1pcs အစိမ်းရောင် 1pcs / 90x180CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x150CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x120CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x210CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x180CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x70CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 70x240CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x120CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x90CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x180CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x160CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x240CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 90x210CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 110x160CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 110x110CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 110x210CM 1pcs အဝါရောင် 1pcs / 110x180CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x70CM 1pcs Khaki 1pcs / 110x240CM 1pcs Khaki 1pcs / 110x210CM 1pcs Khaki 1pcs / 30x50 ခေါင်းအုံး Khaki 1pcs / 45x45 ခေါင်းအုံး ရေတပ် 1pcs / 70x90CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x70CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x150CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x120CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x210CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x180CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x70CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 70x240CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x120CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x90CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x180CM 1pcs ရေတပ် 1pcs / 90x160CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x120CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x90CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x180CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x150CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x240CM 1pcs Khaki 1pcs / 70x210CM 1pcs Khaki 1pcs / 90x90CM 1pcs Khaki 1pcs / 90x70CM 1pcs Khaki 1pcs / 90x160CM 1pcs Khaki 1pcs / 90x120CM 1pcs Khaki 1pcs / 90x210CM 1pcs
မျက်မှောက်ခေတ်ပါးလွှာသောကတ္တီပါပိတ်ထည်ထိုင်ခုံ - အစိမ်းရောင် 1pcs / 110x110CM 1pcs backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လုပ်မှု: ပေါင်းစပ် Kit
အရောင်: Khaki / Navy / Grey / Yellow / အစိမ်းရောင်
ပစ္စည်း: 80% polyester
ပြောင်းပြန်: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး polyester ဖိုင်ဘာ / စေး Non- စလစ်အမှုန်
အထုပ်ထဲ၌ပါဝင်သည့်အရာ - 1 * ဆိုဖာသုတ်ပဝါ
ပစ္စည်းပို့ရန်မှာ ၂ ပတ်ကျော်ကြာသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုထူထပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ထုပ်ပိုးပေးပို့အပေါ်သို့ကျိုးပဲ့သောပါးလွှာသောအထုပ်၌ရှိ၏, ဒါပေမယ့်အားလုံးကံကောင်းထောက်မစွာတစ်ခုလုံး။
အံ့သြစရာကောင်းတာကဘာမျှော်လင့်ထားတာလဲ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒဏ်ငွေထုပ်ပိုး!
လှပသောအဖုံးများ :) ငါ zachwycona ဖြစ်၏;) အကြံပြုပါသည်
ငါအရာအားလုံးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်! ငါအထည်နှစ်ခုအမှာလိုက်တယ်၊ ဒုတိယတစ်ခုကဆိုဖာရဲ့လက်မောင်းအောက်မှာပဲမီးပဲဖြတ်လိုက်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများလျင်မြန်စွာရောက်လာတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
တစ်လခန့်ပေးပို့ခြင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်။ အဖုံးများသည်အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပြီးသိပ်သည်းသည်။ ချော်မသွားပါ